Soo dejisan Microsoft Silverlight 5.1.50918 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight – madal software ah si loo ballaariyo fursadaha ka mid ah daalacashada caanka ah. software wuxuu bixiyaa furitaanka of kala duwan ee web-codsiyada iyo ku celiskii la daawaday animation ah, muuqaallo kale dulinka iyo content warbaahinta ee daalacashada casriga ah. Microsoft Silverlight kuu ogolaanaya in aad ku qorshayso mashruuc taas oo ah codsiyada interactive iyo multimedia lagu daro. software The taageertaa shaqada afaf barnaamijyada kala duwan lana falgala inta badan ee casriga ah web-codsiyada. Microsoft Silverlight ku jira tiro badan oo ah xubno ay gacanta loogu talagalay bixinta dhamaystiran oo talantigii horumarinta ’ah.
Isku dhex la daalacashada caanka ah
Wanaajinaysaa tilmaamayaasha ee interactivity iyo xawaaraha of codsiyada
Jiritaanka xubno gacanta badan
Isku dhex leh farsamooyinka kale ee network
Soo dejisan Microsoft Silverlight
Faallo ku saabsan Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight Xirfadaha la xiriira